Sida lagu Helo Track Magacyada Your Lugood Music in Dufcaddii
> Resource > Lugood > Sida lagu Helo Track Magacyada Lugood Library in Dufcaddii
Marka aad isticmaasho Lugood in dooxi doontaa CD oo heli heeso, aad midkiin waliba la aqoonsado, waayo, magacyada wadada u muuqdaan in ay sida Track 01, Track 02 iyo ka badan. Oo weliba heeso aad ka hesho ilo kale, sida lagu qoro, waxaa laga yaabaa in aysan haysan magacyada saxda ah track. Ugu Xaaladahan oo kale, waxaad u baahan tahay qalab weyn oo si aad u hesho magacyada track u maktabadda Lugood in Dufcaddii aad. Wondershare TidyMyMusic u Mac ( Wondershare TidyMyMusic ) waa inay noqdaan kuwo fursad weyn si ay uga caawiyaan. Waxaa si toos ah u aragto socdaan magacyadooda loogu heesaha oo dhan maktabadda Lugood aad. Intaa waxaa dheer, waxa ay ku siinaysaa awood u leh inay ka saarto heeso labalaabka. Ku rakib barnaamijkan in aad computer iyo ka dibna aan arko sida ay hoos ku shaqaysaa.
1 barnaamijka dejinta maktabadda Lugood aad
Burcad TidyMyMusic dib markii la rakibey. Markaasaa waxaa u iskaan doonaa maktabadda Lugood aad si toos ah iyo dar oo dhan music Lugood ay u nidaamsan Lugood. TidyMyMusic samayn doonaa Lugood ee baar mar kasta oo aad furi. Sidaas, aad music cusub dari doonaa in aan la seegay.
2 Hel magacyada track u maktabadda Lugood
Bal aan marka hore baaritaan aad maktabadda oo dhan Lugood. Riix badhanka Scan in uu madax ka dib sax checkbox ee Search for Songs Allaha. Markaas barnaamijkan ka heli doontaa macluumaad oo dhan songs, oo ay ku jiraan magacyada wadada.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sax ku checkbox ee Search for Songs labalaabka in madax, TidyMyMusic caawin doonaa ogaato gabayadii labalaabka aad Lugood iyo aad go'aansato mid ka mid ah in ay sii joogaan iyo taas oo ka mid ah ayaa si ay u tagaan.
3 Ku dar magacyada wadada si song kasta
Marka habka iskaanka iyo baadi ay ka badan tahay, waxaad riixi kartaa mid ka mid ah hees iyo hubi in ay macluumaad khaanadda saxda ah. Ka dib markii in la hubiyo in magaca track sax yahay iyo si yahay macluumaad kale oo la mid tahay album, waxaad riixi kartaa batoonka Codso si aad u hesho macluumaadka gundhig in song kasta. Waxaa fiican oo dhakhso badan u noqon doonaa haddii aad xulan dhowr heeso iyo codsan waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Waxaad heli kartaa fursad labaad oo ay bedelaan macluumaadka by sixiddiisa keligaa. Guji Edit icon iyo buuxi duurka tafatir ah. Waxaad kale oo jiidi karaan inaad sanam u aagga tahay albumka.
Kor ku xusan waa sida aad u heli karaa magacyada track u maktabadda Lugood in Dufcaddii aad. Download barnaamijkan oo ku xidh in ay isku day ah. Hubi in aad marnaba la dejinayo doonaa, anigu waxaan ahay.
Sida loo dar Album Art in Music in Dufcaddii
Sida lagu Helo Album farshaxanka for Your Music Library
Top 10 Ka Badeli kara ee Lugood si ay u gudbiyaan Music ka PC si iPhone / iPad / iPod
Top 3 Lugood Alternative kaabta
Siyaabo fudud oo lagu wadaagi Lugood playlists dadka kale
Hababka Easy Marka iPad ma hagaagsan doonaa la Lugood
Sida loo wadaag Music on Lugood
Sida loo saar Music ka iPod in Lugood
A Guide Full si ay u gudbiyaan Movies, Music iyo More ka Lugood in Android
Mid ka mid ah Lugood Library Iyadoo Multiple Macs